Ezi zezona laptops zilula kwaye zinzima, iitafile kunye neeselfowuni ukulungisa | Iindaba zeGajethi
Ezi zezilaptops zilula kwaye zinzima, iipilisi kunye neemfowuni ezilungisiweyo
Xa sithenga i-smartphone entsha, ithebhulethi okanye ukuvuselela ilaptop yethu, sihlala sijonga izinto ezinje ngomgangatho wesikrini sayo, amandla ayo, amandla okugcina, ukuzimela kwebhetri yayo, ewe, kunye noyilo lwayo. Nangona kunjalo, asihlali sihlawula kakhulu kwizinto ezisisiseko: isalathiso sokulungiswa. Siyakuqonda oku xa kuvela ingxaki engagutyungelwanga iwaranti kwaye siyaqonda ukuba "kubiza kakhulu ukuthenga izixhobo ezitsha kunokulungisa le."
Ukwenzela ukuba sazi ngakumbi ngokubaluleka kokulungiswa, kananjalo ngenjongo yokuqaqambisa ezo zixhobo "ezisinyanzelayo" ukuba sithenge izixhobo ezitsha qho endaweni yokwenza izixhobo ezilula, nezinamaxabiso aphantsi, ukulungisa, iGreenpeace umbutho kunye neqela le-iFixit basebenzisane ekuphehleleni iwebhusayithi entsha apho sinakho jonga ezona mobiles zibalaseleyo nezimbi, iipilisi kunye neelaptops malunga nokulungiswa kwazo.
1 Kutheni le nto sisamkela ukunyanzelwa ukuba sithenge izixhobo ezitsha?
2 Eyona nto incinci kwaye kulula ukuyilungisa ...
Kutheni le nto sisamkela ukunyanzelwa ukuba sithenge izixhobo ezitsha?
Kuhlala kuthethwa ngako "Ukucwangciswa kokuphelelwa lixesha", into efana nomhla wokuphelelwa lixesha osetyenziswa ngabenzi abaninzi ukuze izixhobo zabo ziyeke ukusebenza emva kwexesha elithile kwaye zisityhalele ukuba sifumane entsha.
Kwiikhompyuter, iitafile kunye nokuhambahamba, elinye icebo elilungileyo lelo lokuhlaziya. Rhoqo abavelisi ayisayi kuxhasa iinguqulelo zamva nje zenkqubo yokusebenzaNgendlela yokuba abanini bezixhobo ezindala bashiyeke ngaphandle kwezona zinto zilungileyo nezona zintsha, kungoko bephinda befumana iiterminal ezintsha, kwiimeko ezininzi, ezingayi kuba yimfuneko.
Kodwa ikhona enye indlela "yokunyanzela" abathengi ukuba bahlaziye iifowuni eziphathwayo, iitafile kunye neelaptops ngaphambili kakhulu kunokuba bebengathanda. Le fomyula, ngokuziphatha nangokuthandabuzekayo ngokokuziphatha, ayikho enye ngaphandle koko yenza kube nzima ukulungisa.
Abavelisi abaninzi bahlala besebenzisa ubuchule obufana nokudibanisa izinto ezahlukeneyo zangaphakathi kunye ukuze umsebenzisi angakwazi ukwenza izandiso kwaye, ukuba ufuna amandla angaphezulu okanye ukugcinwa okungaphezulu, thenga isixhobo esinamandla ngakumbi okanye esinokugcinwa okungaphezulu.
Kodwa eyona nto imbi kakhulu xa, sijamelene nengxaki, sinyanzelwa ukuba siye kwinkonzo yezobugcisa. Kule meko, ngokusengqiqweni, kunzima ngakumbi ukulungisa isixhobo, kokukhona inyusa iindleko zokulungisa. Kukho iimeko apho kungasayi kubakho ukuphinda kulungiswe. Ke, umboleki akanandlela yimbi ngaphandle kokuzihlaziya izixhobo, athenge entsha, achithe kwakhona xa, ukuba umenzi ebenze izinto ngokwahlukileyo, izixhobo bezinokulungiswa kwaye umsebenzisi angaqhubeka nokuzonwabisa ixesha elide.
Le meko igxekiwe iminyaka ngabathengi kunye nemibutho, kwaye ixhaphake kakhulu kangangokuba ibangele umanyano lwe-iFixit kunye neGreenpeace (kuba ingxaki yenkunkuma eveliswe ngale ndlela ikwayingxaki enkulu kwindalo esingqongileyo), abathi namhlanje kunzima ukufumana iipilisi, iifowuni eziphathwayo okanye iilaptops ekulula ukuzilungisa.
Ukulwa le meko, omabini amafemu ajoyine imikhosi kwaye ayila iwebhusayithi entsha apho sinako Jonga ukuba zeziphi izixhobo ezinesalathiso esiphezulu sokulungiswaKe, xa sithenga, sinokuzilungiselela ngcono.
Indawo apho ihleli khona Yijonge kwakhona (Eli ligama lale webhusayithi intsha) eshiya igumbi lokuthandabuza: "Xa sithenga iifowuni eziphathwayo, kutheni samkela ukuba zihlala iminyaka emibini kuphela kwaye zisinyanzela ukuba sithenge izixhobo ezitsha?".
Eyona nto incinci kwaye kulula ukuyilungisa ...
Olu luhlu lweemveliso ezinganeno ezinokulungiswa zihlelwe iindidi ezintathu (iifowuni eziphathwayo, iitafile kunye neelaptops), kwaye sinokwazi ukujonga isikhundla ngokubanzi, okanye uku-odola iziphumo ngophawu okanye ngesalathiso esingaphezulu okanye esisezantsi sokulungiswa.
Okwangoku, i izixhobo ezinesalathiso esiphezulu sokulungiswa Zizo:
I-smartphone ene-index ephezulu yokulungiswa (10/10) yi-Fairphone 2.
Ithebhulethi enesalathiso sokulungiswa okuphezulu (10/10) yi-HP Elite x2 1012 G1.
Ilaptop enesalathiso sokulungiswa okuphezulu (10/10) yiDell Latitude E5270
Ngobubi, izixhobo ezinesalathiso esisezantsi sokulungiswa Zizo:
Kwinqanaba leselula, ngamanqaku ama-3 kwali-10, i-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge.
Kwinqanaba lethebhulethi, ngamanqaku e-1 kwali-10, iMicrosoft Surface Pro 5.
Kwinqanaba leencwadana, ukufumana amanqaku ali-1 kwali-10, i-Apple's 2017 MacBook Retina, iApple's 13 XNUMX MacBook Pro, kunye neMicrosoft Surface Book.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ezi zezilaptops zilula kwaye zinzima, iipilisi kunye neemfowuni ezilungisiweyo
Ayi !!! Sonke abathathe ikhosi yezobuchwephesha kwikhompyuter kunye nokulungiswa kweeselfowuni bhayi bhayi kutyalomali lwethu ???? #Ahorasondesechable
Laptops ezingabizi sitsho
Kum, zombini ii-smartphones kunye neelaptops ekunzima ukuzilungisa zii-Apple's, i-iPhone kunye neeMacs zayo.
Phendula kwiiLaptops ezingabizi kakhulu
URenshi Guang ovela kwiNewsill, sivavanye le mpuku kubadlala umdlalo